10 Soojiidashada Aan Caadiga Ahayn Ee Caalamka | Save A tareenka
Guriga > safarka Europe > 10 Soojiidashada Aan Caadiga Ahayn Ee Caalamka
Tareenka Safarka ee Britain, Tareen safarka Shiinaha, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Travel Holland, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Skotland, Tareenka Safarka Isbaanishka, Tareen Travel The Netherlands, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe
(La Cusbooneysii Ugu Dambeeyay: 29/04/2022)
Kuwani 10 Soojiidashada aan caadiga ahayn ee adduunka oo dhan ayaa ku yaabin doona. Kaniisadda cidhibta qaabaysan ee Cinderella, buuraha cirfiidka ah, buundooyinka la hakiyey, iyo tunnel gaar ah oo ku yaala Ingiriiska – waa wax yar oo ka mid ah kuwa aan caadiga ahayn oo xoogaa la yaab leh, meelaha soo jiidashada waa inaad booqataa aduunka oo dhan.
1. Soojiidashada Aan Caadiga Ahayn Ee Caalamka: Balkoonka Juliet
Waxaa jira dad aad u yar oo aan ogeyn in sheekada Romeo iyo Juliette ay ka dhacday Verona. Waxaa intaa dheer, dad aad u tiro yar ayaan aqoon u lahayn muuqaalka balakoonka jaceylka. Mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee lagu booqdo Verona waa balakoonka Juliet. Balakoonka waa qayb ka mid ah guriga, halkaas oo qoys Cappello ah ay ku noolaayeen qarnigii 13aad. Si kastaba ha ahaatee, balakoonka caanka ah waxaa lagu daray guriga oo kaliya 20qarnigii th.
Intaa waxaa dheer, balakoonka wuxuu noqday mid ka mid ah meelaha ugu caansan Yurub. Halka balakoonka uusan wax door ah ku lahayn dejinta sheekada Romeo iyo Juliet, waxay soo jiidataa boqolaal booqdayaal sanad walba. Jacayl baa i haya, qalbi jabay, riyooyin iyo xamaasad Shakespeare, kaalay inay ka tagaan qoraaladooda jacaylka, rabitaan, iyo qoraalo ku xardhan gidaarka hoostiisa balakoonka Juliet.
2. Fairy Glen, Jasiiradda Skye
Cone-qaabeeya, buuro cagaaran oo cagaar ah, oo ay ku hareeraysan yihiin balliyo iyo biyo-dhacyo, Fairy Glen waa mid ka mid ah meelaha aan caadiga ahayn ee lagu booqdo Isle of Sky. Iyadoo aan la garanayn asal ahaan magaca gaarka ah, Muuqaalka Fairy Glen wuxuu leeyahay soo jiidasho gaar ah.
Meesha ugu fiican ee aragtida weyn ee Fairy Glen waxay ka timid Castle Owen. Meeshani maaha qalcad dhab ah, laakiin halkii dhisme dhagax ah oo u eg qalcaddii fogaanta. Fairy Glen aad bay u yar tahay; Sidaa darteed, waxa fiican in lagu daro booqashada Kilt Rock, Odaygii Storr, iyo Barkadaha Fairy.
Matxafka fanka ee ugu horreeya adduunka, ah soo jiidashada Ladyland korontada ee Amsterdam waa mid ka mid ah 10 soo jiidashada aan caadi ahayn ee Europe. Xitaa haddii aadan taageere u ahayn matxafyada, Matxafkan fluorescent waa waayo-aragnimo weyn oo loogu talagalay carruurta iyo dadka waaweyn. Marka lagu daro ururinta cajiibka ah ee macdanta fluorescent, Ladyland waxay soo bandhigaysaa farshaxan fluorescent la yaab leh laga soo bilaabo 1950-yadii. Waxaa intaa dheer, booqdayaashu waxay helayaan fursad qaali ah oo ay kaga qaybqaataan abuurista shaqadooda farshaxan, iftiin midab leh.
Soojiidashadan yaabka leh waxay ku taal bartamaha degmada Jordan ee Amsterdam, halkaas oo dabaq madow uu ka iftiimo nalal midab leh. Waxaa loogu magac daray Jimmy Hendrix's albamka Electric Ladyland, Soo jiidashadan quruxda badan waxay ku saabsan tahay fanka maskaxda iyo muusiga 70-kii. Shaki la’aan, Matxafka Electric Ladyland ee Amsterdam waa mid ka mid ah meelaha ugu xiisaha badan adduunka.
4. Tunnel-ka Bude, Cornwell England
U eeg tunnel caag ah oo caadi ah oo ku yaal meel baabuurka la dhigto ee supermarket-ka Cornwall, Tunnel-ka Bude waa mid aan caadi ahayn. Soo jiidashadan aan caadiga ahayn waa mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya 10 jiidashada ee England mahad kumanaan nalalka LED iftiimiyay in multicolor.
Waxay ku taal magaalada Bude hurdo, ah 70 m tunnel waa sixir marka la shido. Waqtiga ugu fiican ee la yimaado waa fiidkii, waayo-aragnimada iftiinka ugu dambeeya. Halka Bude Tunnel uu u muuqdo mid cad maalintii, habeenkii waxay noqotaa yaab adduun, soo jiidashada booqdayaasha Britain oo dhan. Guntii iyo gunaanadkii, Tunnel-ka Bude wuxuu noqon karaa a Joogsi madadaalo leh safarkaaga Yurub oo dhan, halkaas oo cajaa'ibka dhabta ah ee tignoolajiyada ay iftiimiso indhaha iyo quluubta yar iyo weynba.
5. Soojiidashada Aan Caadiga Ahayn Ee Caalamka: Spreepark Germany
Berlin ee beerta madaddaalada wuu yaqaan waqtiyo ka wanaagsan, gaar ahaan meesha ugu sarreysa 1969. Spreepark loo isticmaalo soo jiidashada 1.5 milyan soo booqda, in uu fuulo 40 qolalka 45-mitir Ferris wheel. Speerpark waxay ahayd soo jiidashada ugu caansan Jarmalka Bari ilaa dib u midoobidii 1991.
Markay ugu sarrayso, dadka soo booqda waxay raaci karaan rollercoaster waalan, Grand Canyon biyo raacid, iyo koobab wareeg ah oo waaweyn. Halka beerta lagu nasto ay lumisay caannimadeeda sababo la xiriira dhimis, iyo ka tagid, Spreepark ayaa weli ah meel madadaalo ah oo lagu booqdo Berlin. Waxaa intaa dheer, beerta madadaalada ee laga tagay ayaa noqotay mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan ee Yurub, la heli karo oo u furan booqdayaasha xiisaha leh.
6. Thames Town Shiinaha
Meel aan ka fogayn Shanghai, laga soo bilaabo dhismooyinka dhaadheer iyo macbadyadii hore, Waxaad ka heli doontaa soo jiidasho kale oo qaab dhismeedka sawirka magaalo Ingiriisi. Wadooyinka Cobblestone, kaniisad, fagaaraha dhexe ee magaalada, iyo calaamad kugu soo dhawaynaysa Thames Town.
Thames Town waxay qayb ka ahayd qorshe weyn oo lagu abuurayay xaafado caalami ah, laakiin qorshuhu waligiis ma rumoobin. Sidaas, maanta booqdayaasha Shanghai ayaa la dhacsan kara qaar ka mid ah dhismayaasha dhaadheer ee ugu yaabka badan aduunka oo joogso si aad u wareegtid qayb yar oo London ah oo Shiinaha ah.
Laallay 100 mitir ka soo horjeeda darbiyada waadi, Caminito del Rey waa mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan ee Spain. 2.9 km cagta cagta, 4.8 km jidkii gelitaanka, ah 7.7 km dheer Camino waxay ahaan jirtay dariiqa adeega ee biyo xidheenka. Si kastaba ha ahaatee, maanta waa mid ka mid ah meelaha ugu xiisaha badan ee dalxiiska ee Malaga.
Mid ka mid ah sababaha Caminito u soo jiito safarro badan ayaa ah goobta ay ku taal. Deji hareeraha Los Gaitanes Gorge, godad cajiib ah oo ah limestone iyo dolomite. Sidaa darteed, inkastoo buundooyinka cidhiidhi ah iyo kuwa laadlaadsan yihiin, Soo jiidashada aan caadiga ahayn Caminito del Rey waa mid ka mid ah meelaha ay tahay in la arko ee Andalucia, gaar ahaan kuwa jecel adrenaline.
8. Kaniisadda Giant Glass Slipper ee Taiwan
lagu furay 2016, muraayadda cidhibta sare aroos Kaniisaddu waxay haysaa rikoorka Guinness ee qaab dhismeedka kabaha cidhibta sare ee adduunka ugu weyn. Silbadhka muraayadda aadka u weyn waa goob aroos oo caan ah laakiin ma laha shaqo diineed oo dhab ah. Si kastaba ha ahaatee, qaar ayaa laga yaabaa inay yiraahdaan muraayadda weyn ee cidhibta sare waxay u egtahay kabaha Cinderella.
Kaniisadda cidhibta dheer ee Taiwan waa 17.76 mitir dhererka waxayna ka kooban tahay in ka badan 300 muraayad buluug madow, taasoo saamayn cajiib ah ku reebtay dadkii daawanayay. Soo jiidashadan aan caadiga ahayn waxay ku taal Beerta View Park ee magaalada Budai ee Taiwan.
9. Soojiidashada Aan Caadiga Ahayn Ee Caalamka: Dagaalkii Orange Italy
Carnival-ka Ivrea ayaa dhacaya 3 maalmo ka hor Baruurta Talaadada. Ciiddan gaarka ah waxay dadka u keentaa kuwa gaarka ah “dagaal” waddooyinka Ivrea, liin isku tuuraya. In kasta oo uu u eg yahay dagaal cunto oo madadaalo leh, dagaalka orange wuxuu noqon karaa mid rabshad leh, iyo ka-qaybgalayaal badan oo ka tagay nabar iyo dhaawac.
Soo jiidashada rabshadaha leh ayaa la abuuray iyadoo ay sabab u tahay dhacdo rabshado badan. Waxa la yidhi beri baa gabadh yar madaxa laga gooyay markis xun. Iyadoo aysan caddayn in ay run tahay sheekadan, si kastaba ha ahaatee boqolaal dad ah ayaa ka qayb gala dabbaaldegga orange-ka sannad kasta. Sayidka, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah meelaha ugu soo jiidashada badan ee Talyaaniga.
10. Guriga kore ee Fengjing Town qadiimiga ah
Soo jiidashadan aan caadiga ahayn waa muuqaal gaar ah oo ku yaal magaalada qadiimiga ah ee Fengjing. Magaalada qadiimiga ah ee caanka ah ee Shiinaha waxay caan ku tahay kanaalada, iyo tan iyo 2014 waxaa lagu yaqaanaa inay tahay guriga loo yaqaan 'Usidedown house'. Marka ay soo galayaan guriga dadka soo booqda waxay heli karaan alaabta guriga iyo alaabta guriga, oo la mid ah guriga kore ee Poland.
Marka la soo galo guriga, waxaad ka heli doontaa wax walba kor, marka ma aha oo kaliya bannaanka. Iyadoo aysan jirin wax lagu sameeyo soo jiidashadan, mid laguma qancin karo oo laguma danayn karo nashqadan qaab dhismeedka aan caadiga ahayn.
Waxaan ku Save A tareenka waxay ku farxi doontaa inay kaa caawiso qorsheynta safarka kuwaan 10 soo jiidashada aan caadi ahayn ee adduunka oo dhan.
Ma doonaysaa in aad ku dhejiso boggaaga boggaga "10 Soo jiidashada Aan Caadiga ahayn ee Adduunka oo dhan"? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fso%2Funusual-attractions-worldwide%2F - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#soo jiidashada	aan caadi ahayn	Soojiidashada Aan Caadiga Ahayn	soo jiidasho aan caadi ahayn aduunka oo dhan